I-Qgis -Iipasile zeatmatize esekwe kwicandelo lesitshixo se-cadastral -Geofumadas
NgoSeptemba, 2015 cadastre, qgis
Ndineepakethi zikamasipala, ngeenkcukacha zekhowudi ye-cadastral ngendlela elandelayo:
ISebe, uMasipala, iCandelo, ipropathi. enjalo, ukuba i-nomenclature yenziwe njengoko umfanekiso ubonakalisa: Umzekelo: 0313-0508-00059
Imeko kukuba ndinomdla wokuba ndikwazi ukwenza iziqulatho ngokwamacandelo wesibini, kulapho icandelo lenziwa khona (0508). Ke, unokuba neepropathi ezinombala owahlukileyo, ngokuxhomekeke kwicandelo elichongwe kwikhowudi yakho ye-cadastral.
Ngokuqinisekileyo kukho iindlela zokwenza ngcono ngakumbi, kodwa kulo mzekelo, ngendlela elula ndiyichaza umgaqo usebenzisa i-theming kwimithetho.
Cofa ekunene kumaleko wokukhetha umxholo, khetha iiProperties. Ke kwisitayile, khetha "Ngokusekwe kwimigaqo"
Nanku umgaqo omtsha owenziwe, usebenzisa umgca womgca weentetho, ndikhetha kwi-Fields kunye nemilinganiselo, kwintsimi i-CLAVECATASTRAL, ebonisa ukuba undibuza:
Bonke abo apho ikhonkco ifaka ikhowudi ye-cadastral ukuya kwi-0508 (0313-0508-)
Ke ukuze umtya ujongeke njenge "CLAVECATASTRAL" njenge '0313-0508-%' Isimboli% yeyokuba ukusukela ngoko umxholo awunamsebenzi.
Ndicacisa imigaqo emininzi njengamacandelo endifuna ukuwenza. Njengoko ubona, akusekho mfuneko yokwakha njengowokuqala, kodwa kukukopa / uncamathisela umbuzo kunye nokuguqula icandelo lecandelo. Umbala wokugcwalisa uchaziwe nganye nganye, njengoko kubonisiwe kumfanekiso olandelayo.
Kwaye, ngenxa yoko, siya kuba nemephu yeengcambu zezobugcisa ezisekelwe kwingingqi yecandelo (uMmandla okanye iMephu njengoko oku kuthiwa yi-criterion yesithili).
Isitayela sinokugcinwa kwisicelo sakho nanini na.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Ukucandwa kwemida yepropathi nomhlaba kunye nokusebenzisana namaziko oluntu
Post Next Iindaba zeBentley Latin America NewsletterOkulandelayo »